तिब्बतको लागि यात्रा गर्न तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा यात्रा समाचार
तिब्बतको यात्राका लागि तपाईले जान्नुपर्ने सबै कुरा
मारिएला क्यारिल | | चीन, सुझावहरू
त्यहाँ अद्भुत गन्तव्यहरू छन्। सायद केहि टाढा वा पुग्न गाह्रो, यो सत्य हो, तर सायद ती समान कठिनाइहरूले उनीहरूलाई वरपरको आभा प्रदान गर्दछ। द टिबt ती मध्ये एउटा अद्भुत, रिमोट र जटिल गन्तव्य हो।
तर केहि पनि असम्भव छैन त्यसैले यदि तपाईं बौद्ध धर्म मनपराउँनुहुन्छ वा तपाईं केवल टाढा जान वा यहाँ एक ठूलो साहसिक आनन्द लिन चाहानुहुन्छ म तपाईंलाई सबै छोडछु व्यावहारिक जानकारी तपाइँ यात्रा गर्न र तिब्बतको अनुभव गर्न आवश्यक छ।
2 तिब्बतको लागि यात्रा अनुमति
3 तिब्बत यात्राको लागि सूचना र सल्लाहहरू
यो मैदानमा अवस्थित छ उचाई भन्दा बढी4हजार मिटर मा यसैले यसलाई संसारको छत भनिन्छ। चीनसँगको सम्बन्ध आज यति विवादास्पद छ, यद्यपि यो त्यति पुरानो छैन, यो लामो समयदेखि रहेको छ। तिब्बत र चीनको इतिहास जब मंगोलहरूले तिब्बतलाई उनीहरूको इलाकामा सम्मिलित गर्छन् र उनीहरूको प्रभुत्व थोपे।
त्यो सम्झनुहोस् चीनको युआन वंश मंगोलियाई थियो त्यसैले यो राजवंशको अधीनमा कन्ट्रोल कायम रह्यो। तिब्बती जनताको आन्तरिक द्वन्द्व र झगडा भएको थियो जुन बौद्ध सम्प्रदाय बीच थियो जसलाई चिनियाँहरूले कहिलेकाँही एक ढ or्गले सन्तुलन झुकाएर सैन्य समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याए। यसरी लामास भनिने राजनीतिक टाउकोले एक अर्कालाई सफल बनायो र समय बित्दै जाँदा उनीहरूले आफ्नै राजनीतिक सञ्जाल, प्रभाव र कार्यालय बुनाई बुन्न थाले।
किing राजवंश तिब्बतमा पनि उपस्थित थिए, पुरानो चीन १ 1912 १२ मा अन्त्य नभएसम्म कर्तव्यमा लामालाई सहयोग पुर्‍याउने। यस ठाउँमा हामी आफैलाई सोध्छौं, तर पश्चिमीहरूको के हुन्छ? ठीक छ, पश्चिमीहरूले त्यहाँ चम्चा राखे। पहिलो थिए पोर्तुगाली सत्रौं शताब्दीको सुरूमा पछि आयो ईसाई मिसनरीहरू, जे भए पनि लामाले तिनीहरूलाई धपाए। शक्तिको संघर्ष। को अंग्रेजाहरू उनीहरु व्यापार गर्न सक्छन् कि भनेर हेर्न पहुंचे तर चिनियाँहरूले एक शताब्दी भन्दा बढी समयका लागि तिब्बती सीमा बन्द गरे।
स्पष्टतः यसले अ long्ग्रेजीलाई लामो समयसम्म रोकेन त्यसैले उनीहरू हिमालय र अफगानिस्तानमा आए। तिनीहरूले जासूसहरू पठाए र नक्शा बनाए। को रूसी तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। पछि, २० औं शताब्दीको सुरुमा, बेलायतीहरूले तिब्बतीहरूलाई रूसीहरूसँग कुनै चीजमा हस्ताक्षर गर्न रोक्नको लागि सेनाहरू पठाए। तर यो चीनले प्रतिक्रिया जनायो र सार्वभौमताको दाबी गर्‍यो किनकी यस क्षेत्रको प्रभुत्व र उपस्थितिको लामो इतिहास थियो।
अ्ग्रेजीलाई त्यो आगोको ताप कसरी गर्ने भनेर थाहा छ तिब्बती क्रान्ति जहाँ केही राष्ट्रवादीहरूले फ्रान्सेली, मानचु, हान चिनियाँ, र क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेका मानिसहरूलाई मारे। तिब्बतले इ England्ल्यान्ड र चीनले पनि सन्धि गरेको थियो। अन्ततः ग्रेट ब्रिटेन र रसिया दुबै तिब्बतको तिब्बत राज्यको शक्तिलाई मान्यता दिएर चिनियाँ सरकारसँग तिब्बतसँग सम्झौता नगर्न सहमत भए।
सत्य यो हो कि चीनले अनुरूप भएन र "तिब्बतलाई चिनियाँ बनाउने" अभियान चलायो। १ 1912 १२ मा अन्तिम चिनियाँ सम्राटको पतनसँगै भारत बसाईएको दलाई लामा फर्किए र सबैलाई बाहिर पठाए। केहि समयको लागि तिब्बतले केही खास स्वतन्त्रता पायोयद्यपि चीनसँग केही सीमा द्वन्द्व रहेको छ, जुन आफ्नै संकटबाट गुज्रिरहेको थियो, तर en १ 1959। the जन गणतन्त्र चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरे हामी जान्दछौं के भयो।
तिब्बतको लागि यात्रा अनुमति
आज तिब्बत एउटा चिनियाँ क्षेत्र हो पहिलो चीज तपाईलाई चाहिने चिनी भिसा चाहिन्छ। त्यो पर्याप्त छैन किनकि यो एक द्वन्द्व क्षेत्र भएको कारण, पहुँच प्रतिबन्धित र नियन्त्रण गरिएको छ, त्यसैले तपाईंले एक विशेष अनुमति प्रक्रिया गर्नै पर्छ.
यो अनुमतिको बारेमा तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ प्रत्येक वर्ष त्यहाँ बन्द हुने अवधि हुन्छ, एक परम्परा जुन २०० since देखि चल्दै आएको छ र यसले पर्यटन प्रतिबन्ध लगाउँदछ। यस वर्ष यो फेब्रुअरी २ and र मार्च between१ को बीच हो तर अप्रिल १ मा सामान्यमा फर्किन्छ। अनुमति पत्र वा अनुमतिहरू तपाईंले भ्रमण गर्ने योजनाको स्थानहरूमा फरक पर्दछ र प्रत्येक एक फरक अफिस द्वारा जारी गरिएको छ।
चिनियाँ भिसा व्यक्तिगत प्रक्रियामा प्राप्त गर्नुहोस्, तर अन्यले अनुमति दिन्छ केवल एक ट्राभल एजेन्सी मार्फत प्राप्त गरिन्छ। तपाईं यी एजेन्सीहरू अनलाइन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै तिब्बतमा आधारित, किनकि तिनीहरू वास्तवमै प्रक्रियाको लागि उनीहरूलाई आवेदन दिन सहयोग गर्छन्। त्यहाँ विशेष भिसा भनिन्छ समूह भिसायो चीन प्रवेश भिसाको एक प्रकार हो जुन विदेशबाट आएका पर्यटकहरूलाई नेपालबाट तिब्बत आउँछ।
यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई चिनियाँ भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईसँग एउटा छ भने तपाईले काठमाडौंको ग्रुप भिसा प्रक्रिया गर्नु पर्ने हुन्छ, हो। समूह भिसाको लागि आवेदन दिनको लागि हो वा हो तपाईले प्रस्तुत गर्नुपर्छ TTB अनुमति र आमन्त्रित पत्रतसर्थ एक टुरिस्ट एजेन्सी को आवश्यकता। र सबै कुराको लागि उसले चार वा पाँच दिन गणना गर्दछ। TTB तिब्बत पर्यटन ब्यूरो परमिट लो ला तिब्बत भिसा हो। तपाईलाई यसको आवश्यक छ चाहे तपाई मुख्य भूमि चीनबाट तिब्बत जाँदै हुनुहुन्छ वा अन्य देशहरु बाट वा नेपालबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं टुरिस्ट एजेन्सीहरूबाट टाढा हुन सक्नुहुन्न र तपाईंले यात्रा गर्न चाहेको मिति भन्दा कम्तिमा २० दिन अघि यसका लागि आवेदन दिनै पर्छ। यसको कुनै लागत छैन, तर स्पष्ट रूपमा एजेन्सीले प्रक्रियाको लागि तपाईंलाई शुल्क लिनेछ। को अर्को अनुमति PS हो र यो एक हो सगरमाथा जस्ता ल्हासाको बाहिरी क्षेत्रमा ढोका खोलिनेछ वा नगारी प्रिफेक्चर।
यो प्रक्रिया गर्न धेरै सजिलो छ किनकि तपाईं ल्हासामा आउने बित्तिकै तपाईं आफ्नो राहदानी र TTBP सँग एजेन्सीमा जानुहुन्छ र यसले तपाईंको लागि सबै गर्छ। यसले केहि घण्टा लिन्छ र प्रति व्यक्ति yuan० युआन लाग्छ।
यदि तपाईं पनि संवेदनशील सैन्य क्षेत्र (युन्नान, सिचुआन, झिन्जियांग, किन्घाई, पोमी, आदि) भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग सैन्य अनुमति र TTB र PSB। यो सैन्य अनुमति एक्लै यात्रा गर्ने व्यक्तिको लागि होईन फेरी टुरिस्ट एजेन्सी देखा पर्छ। यो प्रक्रिया गर्न एक वा दुई दिन लाग्छ र प्रति व्यक्ति १०० युआन लागत।
अन्ततः त्यहाँ छ सीमा पास यसले अन्य चिनियाँ देशहरू वा प्रान्तहरूको साथ सीमा पार आउँन जान अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंसँग यो कागज छैन भने तपाईं माउन्ट एभरेस चढ्न सक्नुहुन्नt, उदाहरण को लागी। यदि तपाईं ल्हासाबाट काठमाडौं सम्म विमानमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले एयरपोर्टमा सोध्छन्। यो एजेन्सी मार्फत ल्हासामा प्रशोधन गरिन्छ, र तीनदेखि पाँच दिन लिन सक्दछ।
तिब्बत यात्राको लागि सूचना र सल्लाहहरू
हामी पर्यटन एजेन्सीहरूको बारेमा धेरै कुरा गर्छौं र यो केवल किनभने तपाईं तिब्बतमा एक्लै हिंड्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईं ल्हासामा एक्लै बस्नुहुन्न। तर थोरै मानिस राजधानीमा रहनको लागि त्यहाँ जान्छन्। म तपाईंलाई भन्नेछु कि ल्हासाको केही खजाना जान्न तपाईंलाई गाईड पनि चाहिन्छ, अझ रमाइलो लिन, तर सबै परमिटहरू तिब्बतको सबैभन्दा सुन्दर घुम्न, तिनीहरू एजेन्सी मार्फत प्रशोधन हुन्छन्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि उचाइ एकदम धेरै छ आदर्श भनेको प्रशस्त दिनको लागि केहि दिन अगाडि आउनु हो र पछि बिरामी पर्दैन। तपाईं कहाँबाट आउनुभयो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्, कुन उचाइबाट। कपडाका लागि, यो सबै मौसममा निर्भर गर्दछ तर मूलत: यो प्याजको जस्तो पोशाकको बारेमा हो किनभने जब सूर्य तातो हुन्छ। र अवश्य पनि, बुद्धिमानीसाथ र मन्दिरहरू भ्रमण गर्दा धेरै नदेखी।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » तिब्बतको यात्राका लागि तपाईले जान्नुपर्ने सबै कुरा